Ku soo dhowaada Websaytka Xafiiska Cashuur-celinta Australia | Australian Taxation Office
Ku soo dhowaada Websaytka Xafiiska Cashuur-celinta Australia
Bogagaani waxay ka kooban yihiin macluumaad ku saabsan cashuur-celinta Australia si aad u fahamto xuquuqdaada iyo waajibaadkaaga.
Haddii aad dareemayso in wax macluumaada oo ku saabsan bogagaan aanay daboolin xaalladaada, ama aadan hubin siday kuu khuseeyaan, waxaad naga soo raadin kartaa caawima siyaada ah.
Qaar ka mid ah macluumaadkeena waxaa lagu soo bandhigay hab-qoraaleedka loo yaqaan Portable Document Format (PDF). Si loogu eego ama loogu daabaco fayl PDF ah waxaana kumbuyuutarkaagu u baahan doonaa Adobe Acrobat Reader. Waxaad kala soo bixi kartaa koobi lacag la'aana websaytka Adobe.
Haddii aad qabto waxweydiin la xiriirta cashuur-celinta wac:
Waxweydiinta cashuur-celinta shakhsiyeed - 13 28 61
Waxweydiinta cashuurcelinta Ganacsiga - 13 28 66
Waxweydiinta cashuurcelinta Superannuation - 13 10 20.
Haddii aadan si fiican ugu hadlin Ingiriiska aadna doonayso inaad la hadasho ATO, wac Adeega Tarjumaada Qoraalka iyo Afcelinta tel: 13 14 50. Saacadaha shaqada ee lambarka taleefanka: 8am–6pm, Isniinta–Jumcaha.